Auction shares(Auction shares) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नेरुडे लघुवित्तमा रहेको प्राइम बैंकको संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिने, क–कसले किन्न पाउने ?
काठमाण्डौ । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंकको संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिने भएको छ। नेरुडेले बिहीबार एक सूचना जारी गरी प्राइम बैंकको नाममा संस्थामा रहेको ८६ हजार ९०० कित्ता संस्थापक सेयर यही मंसिर २५ गतेदेखि लिलामीमा राखिने जानकारी गराएको हो। यसअघि संस्थामा रहेको प्राइम बैंकको १ लाख १० हजार...
समृद्धि फाइनान्सको लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले लिलामीमा राखेको साढे १८ लाख कित्ता बढी अवितरित हकप्रद सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज बुधबार अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत मंसिर १० गतेबाट लिलामीमा राखेको सेयरमा आज बैंकिङ समयसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक बीओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीले गत...
नेसनल माइक्रोफाइनान्सको लिलामी सेयरमा आजबाट बोलपत्र पेस गर्न सकिने
काठमाण्डौ । नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर आज बुधबारबाट लिलामीमा राखेको छ। संस्थाले कुल १ लाख ४ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा संस्थापक सेयरधनी, सर्वसाधारण र संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लगानीकर्ताले न्यूनतम १ हजार कित्ता र अधिकतम...
एनआईसी एसिया बैंकले राख्यो साढे ६ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, क–कसले किन्न पाउने ?
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले विभिन्न चार कम्पनीमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका साढे ६ लाख कित्ता बढी संस्थापक समूहका सेयर आज आइतबारबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले नागरिक लगानी कोष (सीआईटी), सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा रहेका संस्थापक समूहका कुल ६ लाख ६०...
एनआईसी एसियाले लिलामीमा राखेको सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले लिलामीमा राखेको आफ्नो स्वामित्वमा रहेका तीन कम्पनीका संस्थापक सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज बुधबार अन्तिम दिन रहेको छ। बैंकले सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा रहेका कुल ५ लाख ३६ हजार ५५४ कित्ता संस्थापक सेयर गत मंसिर ७...
नेसनल माइक्रोफाइनान्सले १ लाख बढी सेयर लिलामीमा राख्ने, क–कसले किन्न पाउने ?
काठमाण्डौ । नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर मंसिर १७ गतेबाट लिलामीमा राख्ने भएको छ। संस्थाले संस्थापक समूहको १ लाख ४ हजार कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बिक्री गर्न लागेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकहरु वा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुले बोलपत्र पेस गर्न...
समृद्धि फाइनान्सले भोलिदेखि १८.५१ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा राख्ने
काठमाण्डौ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले साढे १८ लाख कित्ता बढी अवितरित हकप्रद सेयर भोलि बुधबारदेखि लिलामीमा राख्ने भएको छ। कम्पनीले गत असोज १६ गतेदेखि कात्तिक ६ गतेसम्म सेयरधनीहरुका लागि हकप्रद जारी गरेको छ। त्यस क्रममा खरिद आवेदन नपरेका कुल १८ लाख ५१ हजार ३५७ कित्ता सेयर कम्पनीले लिलामीमा राख्ने भएको हो। लिलामीमा राख्न लागिएको...
तीन कम्पनीमा एनआईसी एसियाको स्वामित्वमा रहेका संस्थापक सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका तीन कम्पनीका संस्थापक सेयर आज आइतबारबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा रहेका कुल ५ लाख ३६ हजार ५५४ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएका स�...
फरवार्ड कम्युनिटीको पौने ४ लाख कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा, क–कसले किन्ने पाउने ?
काठमाण्डौ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज बिहीबार (मंसिर ४ गते) बाट पौने ४ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको छ। संस्थाले कुल ३ लाख ७३ हजार ३०७.५७ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बेच्न लागेको हो। यो लिलामी सेयरमा संस्थाका संस्थापक सेयरधनीसहित सर्वसाधारण लगानीकर्ता, अन्य कम्पनी तथा संघसंस्थाले बोलपत्र...
लिलामीमा राखिएको सीआईटीको सेयर उठाउने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले लिलामीमा राखेको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) को संस्थापक सेयरमा आवेदन दिने आज शुक्रबार अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत असोज ३० गतेबाट सीआईटीको ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयर प्रतिकित्ता न्यूनतम १ हजार ९७५ रुपैयाँ...
सिभिल लघुवित्तको सेयर सस्तैमा उठाउने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लिलामीमा राखेको झन्डै ९० हजार कित्ता अतिवरित हकप्रद सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज आइतबार अन्तिम दिन रहेको छ। संस्थाले गत असोजबाट कुल ८९ हजार ४५० कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको छ । यो लिलामीमा गत साउन २५ गतेदेखि भदौ २९ गतेसम्म जारी हकप्रदमा बिक्री नभएका संस्थापक समूहको ११ हजार ६०८ र...
नेको इन्सुरेन्सको पौने ११ लाख कित्ता लिलामी सेयरमा आजबाट आवेदन खुल्यो
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले पौने ११ लाख कित्ताबराबर संस्थापक सेयर आज मंगलबारबाट लिलामीमा राखेको छ। कम्पनीले १० लाख ७० हजार २०६.८४ कित्ता संस्थापक सेयर लिलाममार्फत बिक्री खुलाएको हो। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीसहित अन्य इच्छुक व्यक्ति, फर्म कम्पनी तथा संगठित संस्थाहरुले गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न...
माछापुच्छ्रे बैंकको २०–२० स्मार्ट योजना सञ्चालनमा,२० प्रतिशत वा बढीमा रु२०० सम्मको क्यास व्याक अफर
काठमाण्डौ । स्थापनाको २० वर्ष पूरा गरी २१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा माछापुच्छ्रे बैंकले ग्राहक लक्षित २०–२० (ट्वेन्टी–ट्वेन्टी) स्मार्ट योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । चाडबाडको समयमा हुने किनमेललाई ध्यानमा राख्दै बैंकले बैंकका डेविट तथा क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिंगका प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गरी क्यासव्याक अफर सञ्चालनमा...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लिलामीमा राखेको अवितरित हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन आज सोमबार अन्तिम मौका रहेको छ। कम्पनीले गत असार १४ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन नपरेको कुल ५ लाख ९० हजार १४ कित्ता सेयर गत असोज १३ गतेबाट लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री खुलाएको हो। जसमा संस्थापक समूहको...
मेगा बैंकको १८.४० लाख कित्ता लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । मेगा बैंकले लिलामीमा राखेको १८ लाख ४० हजार कित्ता बढी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज आइतबार अन्तिम मौका रहेको छ। बैंक गत असोज ११ गतेबाट कुल १८ लाख ४० हजार ७३९.६३ कित्ता सेयरको लिलामी खुलाएको हो। यी सेयर उसले २०७४ भदौ ७ गतेदेखि कात्तिक १४ गतेसम्म बिक्री खुलाएको हकप्रदमा आवेदन नपरेपछि अहिले लिलामीमा राखेका हो। योग्य व्यक्ति,...
न्यादीको आइपीओको प्रिअलटमेन्ट आज, बाँडफाँड पर्सिसम्म
मध्यभोटेकोशीको आइपीओ अर्को साता बाँडफाँड हुने
‘सरप्राइज लाभांश’ घोषणाको तयारीमा नवील र एभरेष्ट बैंक
मौद्रिक नीतिको समीक्षा मंसिरमा मात्रै
सरकारले खर्च नगर्दा फेरि घट्न थाल्यो तरलता